.”၂၆ နှဈအတှငျး” တဈကွိမျမြှလှဲလြောငျး အိပျစကျခွငျးမရှိခဲ့တဲ့” ကြောကျဂူဆရာတျောဘုရားကွီး. – Askstyle
.”၂၆ နှဈအတှငျး” တဈကွိမျမြှလှဲလြောငျး အိပျစကျခွငျးမရှိခဲ့တဲ့” ကြောကျဂူဆရာတျောဘုရားကွီး.
ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးအကြောင်း မသိလို့ အွန်လိုင်းပေါ်ရှာကြည့်တော့ မနက်ဖြန် ကျောက်ဂူဆရာတော် မန္တလေးက သူငယ်ချင်းအိမ်ကြွမှာမို့လာဖူးဖို့ လှမ်းဖိတ်တယ်။
ကိုယ်ကလည်း ဆရာတော်အကြောင်း မသိလို့ အွန်လိုင်းပေါ်ရှာကြည့်တော့ ဒီလိုရေးထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်သိရှိထားသာ ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီး အကြောင်းများစွာထဲမှ ကုသိုလ်တိုးရန် အနည်းငယ် ရေးသားတင်ပြအပ်ပါသည် ဘုရား။
ကျွန်နော်နှင့် ဆရာတော်ကြီး ရင်းနှီကျွမ်းဝင်နေခဲ့သည်မှာ (၂၆) နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဖားကန့်ကျောက်တွင်းလောပန်သဌေးကြီး ဘဝမှ အားလုံး စွန့်ကြဲ၍ (ဝ) ထိ ခဝါချ၍ ရဟန်းတစ်ဝါရသည်မှစ၍ အကျွမ်းတဝင် ရှိခဲ့ကြပါသည် ။
ကျွန်တော့ဘဝ အချိန်များစွာကို ဆရာတော်ကြီးနှင့် အနီးကပ် ရှိနေခဲ့ပါသည်။
(၁) ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးသည် အနားယူ လှဲလျှောင်းအိပ်စက်ခြင်းမရှိပါဘုရား(ကျွန်တော်သိရှိထားသော ၂၆ နှစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ လှဲလျောင်း အိပ်စက် အနားယူတာ မမြင်ခဲ့ဖူးပါ) (၂) ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးတွင် ချွေးနံ့ကိုယ်နံ့နံခြင်းမရှိပါ ဘုရား (တစ်ခါသောအချိန်က ဆရာတော်ကြီးသည် ဝိပဿနာတရားများ တရွာလျှင် ၃ ရက်ခန့်ဖြင့် မိုးလင်းမိုးချုပ်သင်ပြ၍ ၁၀ ရွာခန့် တစ်လလောက်ရေမချိုးသင်္ကန်းမလဲဖြစ်ခဲ့ပါ ။
နေ့တွင်ခန္ဓညဏ်ရောက် ရုပ်နမ်ခွဲးခြားတရားများပြ၍ ညတွင်သုဿံဓုဒင် ဆောက်တည်နေခဲ့ပါသည် ရက်၃၀ခန့်မှ ရေချိုးဖြစ်ပါသည် ။
အဆိုပါသင်္ကန်းအား တပည့်တော် လျှော်ဖွတ်ခဲ့ပါသည် ချွေးနံ့ကိုယ်နံ့ လုံးဝမရှိသည်အပြင် သစ်ခေါက်နံ့ပင်ကြိုင်သင်းနေပါသည်) (၃)ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးသည် အချိန်တိုင်း အလုပ်လုပ်နေသောသူ ဖြစ်ပါသည် ဘုရား (၂၄နာရီလုံး တစ်လလုံး တစ်နှစ်လုံး ၂၆နှစ်လုံးလုံး တရားဟောခြင်း စာရေးခြင်း မေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်း သမထဘာဝနာပွားခြင်း ဝိပသာနာဘာဝနာပွားခြင်း များတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ပြုလုပ်နေပါသည်။
(၄) ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီး မေတ္တာဂရုဏာကြီးစွာဖြင့် အားထဲ့ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်တိုင်းတွင် အမြဲတမ်းပင် ပရိတ်ရေများဆူပွက်ပါသည်ဘုရား (ရွာကြီးတရွာတွင် ဆရာတော်အား ပင့်ဖိတ်၍ ဝိပသာနာ တရားစခန်းဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်ကြစဉ် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးနှင့် ရွာသားတချို့မှ တရားစခန်းမဖွင့်ရန် တရားတစ်ပွဲသာလုပ်၍ ပြန်ကြွရန် ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးအား လျှောက်ထား အရေးဆိုလာပါသည် ။
ဤသို့ဖြစ်၍ ရွာလယ်တွင် မဏ္ဌပ်ထိုး၍ ပရိတ်တရားပွဲသာပြုလုပ်ကြပါသည် ပရိတ်တရားပွဲစသည်နှင့် တရွာလုံးတွင်ရှိသော ရေတွင်းထဲ့မှရေ ရေကန်ထဲ့မှရေ ရေအိုးထဲ့မှရေ ရေခွက်ထဲ့မှရေ ရေဘူးထဲ့မှရေ များ ဆူပွက်လျံထွတ်နေကြပါတော့သည်
အကျိုးအနေနှင့် ဤရွာကြီးတွင် ဝိပသာနာ တရားစခန်းဖွင့်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်)(နောက်တင်ပြမည့် တချို့သော အဖြစ်အပျက်များသည် တချို့သောလူများ လက်မခံမယုံကြည်နိုင်စရာများ ရှိနိုင်ပါသည်
အကုသိုလ်မဖြစ်ကြရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည် ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးလည်း သာသနာအတွက် ပင့်ဖိတ်သောနေရာများကို မည့်သည့်နေရာမဆိုကြွနေဆဲပါ ။
ကျွန်တော်လည်း ယနေ့ထိတော့မသေသေးဘဲ ရှိနေပါသေးသည် ဆရာတော်ကြီးအား ကြည်ညို၍ မေးမြန်မည်ဆိုပါကရိုရိုသေသေ လေးလေးစားစား ဖြေကြားပေးပါမည် ။ ကုသိုလ်ပွားရန်ရည်ရွယ်၍တင်ပါသောကြောင့် အကုသိုလ်တော့ မပွားကြစေရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်)
(၅) ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးသည် သင်္ကန်း၃ထည် သပိတ်တစ်လုံး တစ်ပါးနေ ကျောင်းသင်္ခန်းဖြင့်သာ ရောင့်ရဲနေထိုင်တော်မူပါသည်ဘုရား (ဆရာတော်ကြီးတွင် ကြီးကျယ် ခန်းနားလှသော ကျောင်းတိုက်ကြီး ၄ တိုက်ရှိပါသည်။
(က)ဂန်ဂေါမြို့နယ် ကန်ရရွာ ဘိုးဘွားရိပ်သာ ကျောက်ဂူကျောင်း(ဧက ၃၀၀ ကျယ်ဝန်းပါသည်) ( ခ)သုံးဆယ်မြို့ဓမ္မသုခ ကျောက်ဂူကျောင်း(ဧက ၃၀ ခန့်ကျယ်ဝန်းပါသည်)( ဂ)ကလေးမြို့စက်မူဇုံ ကျောက်ဂူကျောင်း(ဧက ၁၀ ကျယ်ဝန်းပါသည် (ဃ)ပေါင်းလောင်းမြို့ မူလပထမ ကျောက်ဂူကျောင်း(ဧက ၁၀ ကျော်ကျယ်ဝန်းပါသည်)ထိုကျောင်းတိုက်ကြီးများတွင် အဆောက်အဦးပေါင်းများစွာ သာသနာ့ဝန်ထမ်း သံဃာ သီလရှင်ပောင်းများစွာ ရှိကြပါသည်
တချို့က တရားမေးလျှောက်ကြပါသည် တချို့က ဝိပသာနာတရားမပြရန်တောင်းပန်ကြသောနတ်များလည်းရှိပာသည် တချို့က ဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော်မူရန် နတ်ရွာစံရန် လျှောက်ထားကြသော နတ်များလည်း တွေ့ရပါသည်)
ဆရာတော်ကြီး သုဿန်သင်္ချိုင်းတွင် ညဘက် ဓူတင်ဆေါင်ရန်ကြွသောအခါ ကျွန်တော်လိုက်ပါ တတ်ပါသည် ကျွန်တော်လိုက်ပါ၍ အိပ်ခဲ့ဖူးသော သင်္ချိုင်းများပင် တစ်ရာကျော်မည်ထင်ပါသည်။
တစ်ခြားနိုင်ငံများနှင့် မြို့ကြီးများတွင် ညဘက်သုဿန်ကြွရန် ခက်ခဲပါ၍ နေ့ခင်းဘက်များတွင်သာ မေတ္တာပို့ ကုသိုလ်အမျှဝေ ကြွရောက်တတ်ပါသည် နယ်မြို့များ ကျေးရွာများတွင် အမြဲတမ်းပင် ညဘက်သုဿန်ဓူတင်ဆောင်ပါသည်။
သင်္ချိုင်းသို့ရောက်လျှင် လူသေကောင် မြေမြုပ်သောနေရာ မီးရှို့သောနေရာ ဂူသွင်းသော နေရာများ၌ တနေရာစီ ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်ရပါသည်။
တစ်နာရီခန့်တရားထိုင်ပြီးပါက တရားဖြုတ် အမျှဝေပီး အနားယူရန် မနက်၃နာရီကျော် လာပင့်ရန် မိန့်ပါသည် ဤတွင်ဆရာတော်ကြီးနှင့် မျက်တစ်ကွယ် မလှမ်းမကမ်း ပေ၃၀၀ခန့်အကွာ သင်္ချိုင်းဇရပ် အုတ်ဂူပော်တို့တွင် အိပ်ရပါသည်။
ကျွန်တော်က သုဿန်ဓူတင်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ ဆရာတော်ကြီးအား ပို့ဆောင်ရန် ပင့်ဆောင်ရန် လိုက်ပါ၍သင်္ချိုင်းတွင်လိုက်အိပ် ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးမှာ တစ်ညတာလုံး မေတ္တာဘာဝနာ သာမထဘာဝနာ ဝိပသာနာဘာဝနာ ကုသိုလ်တရားများအားထုတ်ရင်း မြင်အပ် မမြင်အပ်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် စေရန် ညအချိန်ကို ကုန်ဆုံးစေပါသည်။
မနက်၃နာရီကျော်တွင် ဆရာတော်ကြီးထံချည်းကပ် ပင့်လျှောက်ရပါသည်။ တစ်ညလုံးပြုပြုသမျှ ဘာဝနာကုသိုလ်များကို မြင်အပ်မမြင်အပ်ရှိရှိသမျှတို့အား ကုသိုလ်အမျှပေးဝေကြရပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးနှင့် တစ်ညတာအတူနေရ၍ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြ၍ သာဓုခေါ်ဖြစ်ကြမည် ထင်ပါသည် ။
အမျှ ကုသိုလ်တွေရ၍ ကျွတ်လွတ်သွားခြင်း အဆင့်မြင့်သွားခြင်းများ ဖြစ်ကြသည်ဟု သိရှိရပါသည် ။ မနက်၎နာရီမထိုးခင် လူသူလေးပါးမထခင် သုဿန်မှ မေတ္တာပို့ရင်း တိတ်ဆိတ်စွာထွက်ခွာရပါသည်။ တချို့သင်္ချိုင်းများတွင် တစ်ညသာကြွ၍ တချို့သင်္ချိုင်းများကို နှစ်ည သုံးညကြွတတ်ပါသည်။
ကြွရောက်ရန်ု ကြိုတင်မိန့်ထားလေ့မရှိပါ ည ၉ နာရီကျော် ဆရာတော်ကြီးသင်္ကန်းရုံသည်ကိုကြည့်၍ သာသိရှိရတတ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေရပါသည် အဆင်သင့်မဖြစ်ပါက ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးတည်းသာကြွ သွားပါတော့သည် နောက်မှအမြန်ပြေးလိုက်ရပါသည်)
(၈) ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီး၏ ဦးခောင်းကို ခေါင်းရိတ်ခြင်း ကိစ္စအား မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မရိတ် တပည့်များအားလည်းအရိတ် ခိုင်တား မတွေ့ဘူးပါဘုရား (ထို့ကြောင့် ဆရာတော်ကြီး၏ ဆံတော်များအား လိုခြင်သူ ပောများလှသော်လည်း တစ်ယောက်မျှ မရရှိကြပါ) (၉) ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီး ညသီတင်းသုံးသော ဝါးရုံပုတ်ကြီးမှ အလင်းရောင်များထွက်ပေါ်လာ၍ တစ်တောလုံးလင်းထိန်သွားခဲ့ပါသည်ဘုရား (လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ့်ခန့်က ရွာကြီးတစ်ရွာ၏ သုဿန်သင်္ချိုင်းတွင် ဆရာတော် နှစ်ညတာ ဓူတင်ဆောင်ခဲ့ပါသည် အထက်ပါဖြစ်ရပ်သည် ဒုတိယညတွင် တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။
၎င်းသင်္ချိုင်းသည် လူအစိမ်းသေများကို မြေမြုတ်သော နေရာဖြစ်ပါသည် ည၉နာရီကျော်ခန့်တွင် ဆရာတော်အား သုဿန်အလယ်လာက် တွင်ရှိသော ဝါးရုံပုတ်ကြီးအောက်တွင် နေရာချ၍ ကျွန်တော်တို့က သင်္ချိုင်းဇရပ်ပေါ်တွင် အိပ်ကြပါသည်။
ည၁၂နာရီခန့်တွင် ရွာသား ၁၀ ယောက်ခန့်အပြေးအလွှားရောက်လာ၍ ဆရာတော်ကြီး သီတင်းသုံးသော ဝါးရုံပုတ်ကြီး မီးအကြီးအကျယ်လောင်နေပြီဆိုပြီးအော်ပြီး ပြေးလာကြပါသည်။
ဆရာတော်ကြီး သီတင်းသုံးသော ဝါးရုံပင်ကြီးမှ အလင်းရောင်သည် တစ်တောလုံးလင်းထိန်သွားခဲ့ပါသည် ၃မိနစ်ခန့်ကြာမည် ထင်ပါသည်။
ထို့နောက် တဖြည်းဖြည်းမှိန်သွား၍ အမှောင်အတိ ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့သည်။ ထို့နောက် ရွာသားများလည်း ပြန်သွားကြ၍ ကျွန်တော်လည်း အဖြေမသိသော အတွေးများဖြင့် သင်္ချိုင်းဇရပ်ပေါ်တွင် ကျန်နေခဲ့ပါတော့သည်။
(၁၀) ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီး၏ မေတ္တာတော်ကြောင့် အကြီးအကျယ် ပစ်ခတ်နေကြသော တိုက်ပွဲကြီး ရပ်သွားခဲ့ပါသည်ဘုရား (လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ခန့်ကဖြစ်ပါသည် ဆရာတော်ကြီးအား တရားဟော တရားပြ ပင့်ဖိတ်ကြ၍ နယ်စပ်ဒေသသို့ ကျွန်တော်ကားဖြင့်ပင့်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။
တောလမ်း ခရီးတွင် ဆရာတော် ချပေးသော မေတ္တာပို့ စာသားများကို ကျယ်နိုင်သမျှ ကျယ်ကျယ် လိုက်ဆို၍ ကားမှန်တံခါးများ ပိတ်ကာ မောင်းနှင်လာခဲ့ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှ့ အသံများကို မကြားရဘဲ ကားကိုအမြန်မောင်းလာရာ တောလမ်းတနေရာ တောင်ကုန်းကွေ့ အရောက် တွင် အကြီးအကျယ် တိုက်ပွဲဖြစ်နေကြသော လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ နှစ်ခုကြားသို့ ဘွားခနဲ့ ရောက်သွားခဲ့ပါသည် ။
ကားကိုဆက်မမောင်းရဲဘဲ အမြန်ရပ်လိုက်ရပါသည် လက်နက်ကြီး ကျရောက် ပေါက်ကွဲသံများကို ဆက်တိုက်ကြားရပါသည် သေနတ် ဂတ်လိုက်ဆွဲသံများ ကျည်ဆံသံများ တဒိုင်းဒိုင်း တရွီးရွီးအဆတ်မပြတ် ကြားနေရပါ သည်။
ကျွန်တော်နှင့် သူရဲကောင်းကြီး ကိုဖိုးအိတို့ လန့်ဖျတ်၍ ကားအောက်သို့ ပြေးဝင်၍ဝပ် နေရန်ကြံကြပါသည် ဆရာတော်အားကြည့်လိုက်ရာ မေတ္တာပို့မပျက် တည်ငြိမ်စွာ ဆက် လက်၍မေတ္တာဘာဝနာပွားနေပါသည်။
မည်သည်အချိန်မှ စ၍တိုက်ပွဲဖြစ်နေသည်ကိုမသိပါ ဆရာတော်ကားရပ်ပြီး မကြာမှီ တိုက်ပွဲရပ်၍ အားလုံးတိတ်ဆိပ်သွားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကား၏ ညာဖက်တောင်ကုန်းပေါ်မှ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ဆုတ်ခွာသွားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကား၏ဘယ်ဖက် ချောက်ထဲ့မှ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၃၀ ခန့် လက်နက်ကိုယ်စီကိုင်၍ ကားလမ်းပေါ်တက်လာကြပါသည် နှစ်ဖက်စလုံး အကျအဆုံးမရှိ တပ်ဆုတ်သွားကြသည် ထင်ပါသည်။
(လွန်ခဲ့သော ၇ နစ်ခန့်လောက်ကဖြစ်ပါသည် ဆရာတော်ကြီးအား ခန္တီးကျောက်စိမ်းမှော်မှ တရားဟော တရားပြ ပင့်ဖိတ်၍ ကျွန်တော်ကားဖြင့် ပင့်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
မဟာမြိုင်တောကြီးကို အလျှားလိုက် ကားဖြင့်ဖြတ်၍ ပင့်ခဲ့ပါ သည်။ ထိုအချိန်တုန်းက ကားလမ်းသည် အင်မတန်ပင်ဆိုးရွား ကြမ်းတမ်းလှပါသည် ယခုလည်းသိပ်မကောင်းသေးပါ။
အဆိုပါဒေသသည် ရေလမ်းကိုသာ အသုံးများပါသည် တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး ကားမောင်းခရီးတွင် ကားတစ်စီးမျှ မတွေ့ မရှောင်ရပါ လူနေအိမ် ရွာများလည်း မရှိကြပါ။
မြစ်ကြောင်းတလျှောက်တွင်သာ နေထိုင်ကြသည်ဟုသိရပါသည်။ ပင့်ဖိတ်ထားသောနေရာ ဘုန်ကြီးကျောင်းကိုအရောက်တွင် အဆိုပါကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးမှ ကျောင်းပော်မှ တအံတသြ ဆင်း၍ ကျွန်တော်ကားနှင့် ကျွန်တော်ကို နှစ်ပတ်လောက်ပတ်ကြည့်ကာ ကားလည်းကောင်းလွန်း၍ လူလည်းတော်၍ သာရောက်လာသည် မည်သူမျှ ဤခရီးကို ကားနှင့်မလာကြဖူးဘူးဟု မိန့်ခံရပါသည်။
လမ်းဘေး နံရံတိုက်မိ့လိုက် သစ်ပင် တိုက်မိ့လိုက် အောက်က တိုက်လိုက် အပေါ်က တိုက်လိုက် ဖြင့်ပင်နောက်နေ့ တရားပွဲ မှီရန် မှန်မှန်မောင်းလာပါသည်။
ည ၁၁ နာရီကျော်လာပါသည် ၁၂ နာရီထိုးရန် ၁၀ မီနစ်ခန့်အလိုတွင် ဆရာတော်ကြီးမှ လမ်းတလျှောက်ပို့လာသော မေတ္တာပို့ကို ခဏရပ်၍
ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်၍ တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး ဆိုတော့ ကားကောလူကော ပင်ပန်းနေလောက်ပီ ရှေ့နားမှာ ကောက်ရိုးပုံ ဖြစ်ဖြစ် သစ်ပင်အောက် ဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရင် နား ကြမယ် လို့မိန့်ပါသည်။
ခဏခန့်မောင်းလာပီးချိန်တွင် ကားမီရောင်အောက် လမ်းဘေးတွင် ရာဇမတ်ကွက်များကာရံထားသော ခြံကြီးကိုတွေ့ရပါသည် ခြံတံခါး ဖွင့်ထား၍ ကားကိုခြံထဲ့မောင်းဝင်လိုက်ပါသည် ။
ကျွန်တော်လည်းကားပေါ်မှ အမြန်ဆင်း၍လူရှိလား လူရှိလား အော်ခေါ်ရင်း လူလိုက်ရှာပါသည် မည်သူမှ မတွေ့ရပါ ခြံထောင့်တွင် ဝါးဖြင့်သပ်ရပ်စွာ ဆောက်ထားသော တဲ့လေးတစ်လုံး တွေ့ရပါသည်။
သုံးဖက်ကိုဝါးဖြင့်ကာရံထား၍ အခင်း ကိုလည်း ဝါးကြမ်း လေး တဆင့်ခံ ခင်းထားပါသည် သံဃာစင်ကဲသို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ကားပေါ်တွင် ပါလာသော ထိုင်ခုံအားအမြန်ချ၍ ဆရာတော်အား ပိုင်ရှင်မတွေ့ကြောင်း တစ်ညတာ ဝါးတဲကျောင်းအသစ်လေးပေါ်တွင် သီတင်းသုံးဖို့ ပင့်လျှောက်ခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်အား နေရာချပေးပြီး ကျွန်တော်လည်း ကားထားရှိရာ ခြံထောင့်သို့ပြန်လာပါသည် ကားဘေးမနီးမဝေးကွင်းပြင်တွင် မီးမွေးရန်အသင့်ဖြစ်နေသော မီးဖိုကိုတွေ့ရ၍ မီးမွေး၍ မီးလှုံဖြစ်ပါသေးသည် အသင့်တွေ့ရသော ပန်းသီးတစ်လုံးကိုလည်း ကျွန်တော်၏ညစာအဖြစ် စားခဲ့ပါသေးသည်။
ညတစ်နာရီခန့်တွင် ကျွန်တော်ကားထဲ့တွင်ဝင်အိပ်ဖြစ်ပါသည် မနက် ၃ နာရီခန့်တွင် ဆရာတော်မှ ကားတံခါးလာခေါက်နိုး၍ ခရီးဆက်ရန် အချိန်တန်ပြီလို့မိန့်၍ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါသည် မနက် ၈ နာရီခန့်တွင်ပင့်ဖိတ်ထားသော နေရာသို့ရောက်ခဲ့ပါသည် ဆရာတော်ကြီးမှ တရာဟော တရားပြ နှစ်ရက်ပြုလုပ်ဖြစ်ပါသည်။
အပြန်နေ့တွင် အားရုံဆွမ်းကပ် နေ့ဆွမ်းအားသပိတ်အတွင်းလောင်းလှူ ကပ်လိုက်၍ ပင့်ဆောင်လာခဲ့ပါသည် အလာတုံးက ညအိပ်ခဲ့သော ဝါးကျောင်းတဲ့တွင် နေ့ဆွမ်းကပ်မည်ဟု စိတ်ကူးလာခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ထိုခြံတဲနေရာသည် သစ်ကြီးဝါးကြီးအပင်များသာ တွေ့ရပါတော့သည် ထို့နေရာတွင်ပင့် ဆရာတော်ကြီးအား အသင့်ပါလာသော နေ့ဆွမ်းအား ကပ်ဖြစ်ခဲ့ပ်ါသည် )(၁၂) ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီး၏ တရားတစ်ပွဲ အကြောင်းပြု၍ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ဘုရား (အိမ်ခြေ တစ်ရာကျော်ရှိသော တောင်ပေါ်ရွာလေး တစ်ရွာသည် ဘာသာခြားတစ်ခုမှ စည်းရုံး၍ တစ်ရွာလုံးကျွတ် ဘာသာဝင်ပွဲကြီး စည်ကားစွာကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေသော နေ့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုနေ့သည် မိုးများလည်း ရွာနေပါသည် တောင်ကျရေများလည်းကျနေပါသည် ချောင်းရေများလည်းလျှံနေပါသည် တောင်ပေါ်ရွာ ဖြစ်သဖြင့် လမ်းများလည်း ရွှံစေးများဖြင့် သွားလာရန် အင်မတန် ခက်ခဲ့နေပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် ဆရာတော်ကြီးသည် ရွာလယ်လမ်းမှ တစ်လှမ်းခြင်း တစ်လှမ်းခြင်း လမ်းလျှောက်၍ ရွာထဲသို့ ဝင်လာပါသည်။ ထူးခြားမူ့ အနေဖြင့် မိုးရွာနေသော်လည်း သင်္ကန်းများ ရေမစိုပါ လမ်းမှာ ဗွက်ထနေသော်လည်း ခြေထောက်တို့တွင် ရွှံများမပေကျံပါဘာသာခြားသို့ ကူပြောင်းပွဲလုပ်နေသော လူအုပ်ကြီးသည် ဆရာတော် အနီးတွင် ဝိုင်းအုံလာကြပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးမှ တစ်နာရီခန့် တရားဟောခဲ့ပါသည် ဘာသာခြားသို့ မဝင်ဖြစ်တော့ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့သာ တစ်ရွာလုံး ဖြစ်သွား ခဲ့ပါသည်။ ထိုရွာလေးသည် ယခုအချိန်ထိ ဆရာတော်ကြီးအား မကြာခဏ ပင့်ဖိတ်၍ ဝိပသာနာ တရားစခန်းများ ပြုလုပ်ဖြစ်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်) (၁၃) ကျောက်ဂူ ဆရာတော်ကြီး၏ အစွမ်းထက်၍ အင်မတန်မှ အသုံးဝင်လှသော ဂါထာ တော်တစ်ပုဒ်အား ကျွန်တော် ရရှိခဲ့ပါသည်ဘုရား။
( ထိုဂါထာအား ဆရာတော်ကြီးမှ ရှေ့ကချပေး၍ ကျွန်တော်တို့မှ နောက်ကလိုက်ဆိုရင်း အသဲနှစ်လုံးထဲ့ စွဲနေခဲ့ရပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးကို အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ပင့်ဖိတ်ကြ၍ ဓမ္မ ခရီး သွားလာ နေထိုင်ရင်း အခက်အခဲများရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း/ပြဿနာများ/ပင်ပန်းမူ့များ/ဆင်းရဲမူ့များ/အနှောင့်အယှက်များ/ငတ်မွတ်ဆာလောင်မူ့များ/အိပ်ခြင်မူ့များ/ဖျားနာမူ့များ/…..စသဖြင့် စသည်ဖြင့် အဆင်မပြေမူ့များ ကြုံလာတိုင်း ၎င်းဂါထာ တော်ကို ဆရာတော်ကြီးမှ ကျယ်ကျယ်လိုက်ဆိုကြရန် မိန့်ကြား၍ ရှေ့မှ ချပေးပါသည် ကျွန်တော်တို့လည်း လိုက်ဆိုကြရပါသည် ကျွန်တော့ အတွက်တော မည့်သည့် ပြဿနာ များမဆို၎င်းဂါထာ အတိုင်း ရွတ်ဆို နှလုံးသွင်း ကျင့်သုံးလိုက်ပါက မပြေလည်စရာ အကြောင်း မရှိ အားလုံး အဆင် ပြေသွားပါသည် ဆရာတော်ကြီး၏ ဂါထာတော်အား လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ။
ဘုရားတပည့်တော်တို့သည် မြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်ကြီး အတွက်ဆိုရင်နွားကဲ့သို့ ဆွဲပါမည် ကျွဲကဲ့သို့ ရုန်းပါမည် မြင်းကဲ့သို့ ပြေးပါမည် မြည်းကဲ့သို့ ပိုးပါမည် ခြေင်္သကဲ့သို့ ရဲရင့်ပါမည် သိုးကဲ့သို့ ရိုးသားပါမည် ။
ဆင်ကဲ့သို့ အေါင်းပါမည် ရေကဲ့သို့ ပေးဆပ်ပါမည် လေကဲ့သို့ အကျိုးပြုပါမည် မြေကြီးကဲ့သို့ သီးခံ သည်းခံ ပါတော့မည် ဘုရား သာဓု သာဓု သာဓု ရွတ်ဆို ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ ) (၁၅) ကျောက်ဂူ ဆရာတော်ကြီးသည် တစ်ချိန်တည်း တွင် နှစ်နေရာ၌ တွေ့မြင့် ရောက်ရှိနေတတ်ပါသည်ဘုရား (ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်ပွား နှစ်ပါးစီဖြစ် နေတတ်ပုံများကို မကြာခဏ ဆိုသလိုတွေ့ရတတ်ပါသည် ။
၎င်းများထဲ့မှ့ လေးငါးခုလောက်ကို ကျွန်တော် တတ်သလောက် ရေးသားတင်ပြပါမည် စာအရေးအသား မကျွမ်းကျင်၍ နားမလည်ပါက သည်းခံ၍ နှစ်ခေါက် သုံးခေါက်ဖတ်ပေးကြပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
တစ်ခါသောအချိန်က ဆရာတော်ကြီးအား တရားပွဲများပင့်ဖိတ်ကြ၍ ကရင်ပြည်နယ်ဖက်ကို ကျွန်တော့်ကားဖြင့်ပင့်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးအား ဘေးမှတင်ဆောင်၍ ကားမောင်းနေစဉ် ကလေးမြို့မှ ဖုန်းဝင်လာပါသည်။
ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းပွဲပြီးရင် ကလေးမြို့ထဲ ကြွအုံးမလားတဲ့ ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ ပြန်မေးမိ့ပါသည် တမူးဖက်ကရွာ တရွာမှာ ရွာလုံးကျွတ် ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းနေတယ် အဲဒါပိးရင် ကလေးမြို့ထဲ့ကိုပင့်ခြင်လို့ ဟုပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း ချက်ခြင်းပင် ကားမောင်းရင်း ကျောက်ဂူ ဆရာတော်အား လျှောက်လိုက်ပါသည် တမူးဖက်ကရွာတရွာမှာ ကျောက်ဂူဆရာတော်တစ်ပါး ရောက်နေတယ်တဲ့ဘုရား။
ဆရာတော်ကလည်း ချက်ခြင်းပင် ရုက္ခစိုးနတ်တွေက ချစ်ကြလို့ အဲလိုဘဲ ခဏခဏဖြစ်တယ် ဟုမိန့်ပါသည် (၁၆) တစ်ခုသော ဘုရားထီးတင်ပွဲတွင် တရားပွဲပင့်ဖိတ်၍ ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီး ကြွရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဘုရားထီးတင်ရာ၌လည်း ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါသည် ထီးတင်ရာတွင် အောက်ဖက်ကထီးတော်ကို ရထားပေါ်သို့ တင်ရာနေရာတွင်လည်း ဆရာတော်ကြီးရှိနေ၍ စေတီထိပ်ပေါ်တွင် ထီးတော်အား ရထားပေါ်မှချ၍ စေတီတွင် တပ်ဆင်ပူဇော်သော နေရာတွင်လည်း ဆရာတော်ကြီး ရှိနေ့ခဲ့ပါသည်) (၁၇) လွန်ခဲ့သော သုံးလေးနှစ်ခန့်က ဆရာတော်ကြီး ပဲခူးတိုင်း သုံးဆယ်မြို့ ကျောက်ဂူကျောင်းတွင် ဝါဆိုဝါကပ် သော အချိန်ကဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း ဆရာတော်ကြီးနားတွင် ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားဖြင့် အချိန် တော်တော် များများရှိနေဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ့တွင် ဆရာတော်ကြီးမှ ကျွန်တော့်အား ခေါ်၍ ကန် (၇) ရွာကို တစ်ရွာတစ်စီး နာရေးကူညီမူ့ ကားများလှူဒါန်းလိုသည် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရန် ကုသိုလ် ပေးပါ သည် ကားများဝယ်ယူ ပို့ဆောင်ရင်း ကန်(၇)ရွာ ကျောက်ဂူကျောင်းသို့ ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်ပြန်ရန် လိုင်းကားစောင့်ရင်း ကျောင်းပေါ်တွင် နှစ်ရက်သုံးရက် နေဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ကျောင်းပေါ်တွင် ဘုရားဖူးဧည့်သည် ဆယ်ယောက်ခန့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲံ တွေ့၍ ထမင်းများစားသွားကြရန် အဆင်သင့်ပြင်ထားကြောင်း ညအိပ်နားကြမည်ဆိုပါကလည်း အဆင်ပြေပါကြောင်း ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးတော့ သုံးဆယ်မြို့ မှာဝါဆို၍ မရှိပါကြောင်းပြောသောအခါ ဒီကျောင်းကို ခဏ ခဏလာဖူးပါကြောင်း ထမင်းလည်းဆွမ်းတန်းတွင် စားပီးပါကြောင်း ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးကိုလည်း အခုဘဲတစ်ဖွဲ့လုံး ဖူးခဲ့ပီးပါကြောင်း ဝမ်းသာ ပျော်ရွင်စွာပြော၍ကားပေါ်တက်ကာထွက်ခွာသွားကြပါသည် ။ ခဏအကြာတွင် နောက်ဘုရားဖူးအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ တွေ့ပြန်၍ ထမင်းများစားသွားကြရန် ဖိတ်ဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်တော်လည်း ဧည်သည်များကို ရုံးကျောင်းပို့ နောက် ဆွမ်းတန်းပိုပြီးဆရာတော်ကြီး သီတင်းသုံးရာ တဲကျောင်းလေးသို့ တိတ်ဆိပ်စွာ တစ်ယောက်တည် သွားချောင်းဖြစ်ပါသည် ။
ဆရာတော်တော့မမြင်ရ မတွေ့ရပါ မရှိပါ ကျွန်တော်လည်း ရိုသေစွာ ရှိ့ခိုးဦးချ၍ ဆရာတော်မှ ကားများပို့ခိုင်းသော ကိစ္စ ပြီးစီးပါကြောင်း နောက်ထပ် ကုသိုလ်ပေးအလုပ်ခိုင်းလိုပါက အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြာင်း သုံးဆယ်မြို့ကိုရောက်လျှင် ဆရာတော်နှင့်တွေသောအခါ လျှောက်ရန်ရှိသည်များကို(ရီဟာ့ဇယ်) လုပ်ရင်း လျှောက်ထားလိုက်ပါသည်။
Source ; အင္တာနက်/strong>
ကြောကျဂူဆရာတျောကွီးအကွောငျး မသိလို့ အှနျလိုငျးပျေါရှာကွညျ့တော့ မနကျဖွနျ ကြောကျဂူဆရာတျော မန်တလေးက သူငယျခငျြးအိမျကွှမှာမို့လာဖူးဖို့ လှမျးဖိတျတယျ။
ကိုယျကလညျး ဆရာတျောအကွောငျး မသိလို့ အှနျလိုငျးပျေါရှာကွညျ့တော့ ဒီလိုရေးထားတာ ဖတျရပါတယျ။ ကြှနျတျောသိရှိထားသာ ကြောကျဂူဆရာတျောကွီး အကွောငျးမြားစှာထဲမှ ကုသိုလျတိုးရနျ အနညျးငယျ ရေးသားတငျပွအပျပါသညျ ဘုရား။
ကြှနျနျောနှငျ့ ဆရာတျောကွီး ရငျးနှီကြှမျးဝငျနခေဲ့သညျမှာ (၂၆) နှဈကြျောရှိခဲ့ပါပွီ။ ဖားကနျ့ကြောကျတှငျးလောပနျသဌေးကွီး ဘဝမှ အားလုံး စှနျ့ကွဲ၍ (ဝ) ထိ ခဝါခြ၍ ရဟနျးတဈဝါရသညျမှစ၍ အကြှမျးတဝငျ ရှိခဲ့ကွပါသညျ ။
ကြှနျတော့ဘဝ အခြိနျမြားစှာကို ဆရာတျောကွီးနှငျ့ အနီးကပျ ရှိနခေဲ့ပါသညျ။
နတှေ့ငျခန်ဓညဏျရောကျ ရုပျနမျခှဲးခွားတရားမြားပွ၍ ညတှငျသုဿံဓုဒငျ ဆောကျတညျနခေဲ့ပါသညျ ရကျ၃၀ခနျ့မှ ရခြေိုးဖွဈပါသညျ ။
အဆိုပါသင်ျကနျးအား တပညျ့တျော လြှျောဖှတျခဲ့ပါသညျ ခြှေးနံ့ကိုယျနံ့ လုံးဝမရှိသညျအပွငျ သဈခေါကျနံ့ပငျကွိုငျသငျးနပေါသညျ) (၃)ကြောကျဂူဆရာတျောကွီးသညျ အခြိနျတိုငျး အလုပျလုပျနသေောသူ ဖွဈပါသညျ ဘုရား (၂၄နာရီလုံး တဈလလုံး တဈနှဈလုံး ၂၆နှဈလုံးလုံး တရားဟောခွငျး စာရေးခွငျး မတ်ေတာဘာဝနာပှားခွငျး သမထဘာဝနာပှားခွငျး ဝိပသာနာဘာဝနာပှားခွငျး မြားတဈခုမဟုတျတဈခု ပွုလုပျနပေါသညျ။
ဤသို့ဖွဈ၍ ရှာလယျတှငျ မဏ်ဌပျထိုး၍ ပရိတျတရားပှဲသာပွုလုပျကွပါသညျ ပရိတျတရားပှဲစသညျနှငျ့ တရှာလုံးတှငျရှိသော ရတှေငျးထဲ့မှရေ ရကေနျထဲ့မှရေ ရအေိုးထဲ့မှရေ ရခှေကျထဲ့မှရေ ရဘေူးထဲ့မှရေ မြား ဆူပှကျလြံထှတျနကွေပါတော့သညျ
အကြိုးအနနှေငျ့ ဤရှာကွီးတှငျ ဝိပသာနာ တရားစခနျးဖှငျ့ခှငျ့ ရရှိခဲ့ပါသညျ)(နောကျတငျပွမညျ့ တခြို့သော အဖွဈအပကျြမြားသညျ တခြို့သောလူမြား လကျမခံမယုံကွညျနိုငျစရာမြား ရှိနိုငျပါသညျ
အကုသိုလျမဖွဈကွရနျ တောငျးပနျအပျပါသညျ ကြောကျဂူဆရာတျောကွီးလညျး သာသနာအတှကျ ပငျ့ဖိတျသောနရောမြားကို မညျ့သညျ့နရောမဆိုကွှနဆေဲပါ ။
ကြှနျတျောလညျး ယနထေိ့တော့မသသေေးဘဲ ရှိနပေါသေးသညျ ဆရာတျောကွီးအား ကွညျညို၍ မေးမွနျမညျဆိုပါကရိုရိုသသေေ လေးလေးစားစား ဖွကွေားပေးပါမညျ ။ ကုသိုလျပှားရနျရညျရှယျ၍တငျပါသောကွောငျ့ အကုသိုလျတော့ မပှားကွစရေနျ တောငျးပနျအပျပါသညျ)
ဆရာတျောကွီး သုဿနျသင်ျခြိုငျးတှငျ ညဘကျ ဓူတငျဆေါငျရနျကွှသောအခါ ကြှနျတျောလိုကျပါ တတျပါသညျ ကြှနျတျောလိုကျပါ၍ အိပျခဲ့ဖူးသော သင်ျခြိုငျးမြားပငျ တဈရာကြျောမညျထငျပါသညျ။
တဈခွားနိုငျငံမြားနှငျ့ မွို့ကွီးမြားတှငျ ညဘကျသုဿနျကွှရနျ ခကျခဲပါ၍ နခေ့ငျးဘကျမြားတှငျသာ မတ်ေတာပို့ ကုသိုလျအမြှဝေ ကွှရောကျတတျပါသညျ နယျမွို့မြား ကြေးရှာမြားတှငျ အမွဲတမျးပငျ ညဘကျသုဿနျဓူတငျဆောငျပါသညျ။
ဆရာတျောကွီး၏ သုဿနျဓူတငျဆောငျပုံမှာ ည၉နာရီကြျော လူသူလေးပါး အိပျပွီးခြိနျတှငျ သုဿနျသို့ တိတျဆိတျစှာ မတ်ေတာပို့ရငျး ဝငျရပါသညျ။
သင်ျခြိုငျးသို့ရောကျလြှငျ လူသကေောငျ မွမွေုပျသောနရော မီးရှို့သောနရော ဂူသှငျးသော နရောမြား၌ တနရောစီ ကြှနျတျောတို့တရားထိုငျရပါသညျ။
တဈနာရီခနျ့တရားထိုငျပွီးပါက တရားဖွုတျ အမြှဝပေီး အနားယူရနျ မနကျ၃နာရီကြျော လာပငျ့ရနျ မိနျ့ပါသညျ ဤတှငျဆရာတျောကွီးနှငျ့ မကျြတဈကှယျ မလှမျးမကမျး ပေ၃၀၀ခနျ့အကှာ သင်ျခြိုငျးဇရပျ အုတျဂူပျောတို့တှငျ အိပျရပါသညျ။
ကြှနျတျောက သုဿနျဓူတငျဆောငျခွငျးမဟုတျပါ ဆရာတျောကွီးအား ပို့ဆောငျရနျ ပငျ့ဆောငျရနျ လိုကျပါ၍သင်ျခြိုငျးတှငျလိုကျအိပျ ခွငျးသာဖွဈပါသညျ။ ဆရာတျောကွီးမှာ တဈညတာလုံး မတ်ေတာဘာဝနာ သာမထဘာဝနာ ဝိပသာနာဘာဝနာ ကုသိုလျတရားမြားအားထုတျရငျး မွငျအပျ မမွငျအပျမြားနှငျ့ရငျးနှီးကြှမျးဝငျ စရေနျ ညအခြိနျကို ကုနျဆုံးစပေါသညျ။
မနကျ၃နာရီကြျောတှငျ ဆရာတျောကွီးထံခညျြးကပျ ပငျ့လြှောကျရပါသညျ။ တဈညလုံးပွုပွုသမြှ ဘာဝနာကုသိုလျမြားကို မွငျအပျမမွငျအပျရှိရှိသမြှတို့အား ကုသိုလျအမြှပေးဝကွေရပါသညျ။
ဆရာတျောကွီးနှငျ့ တဈညတာအတူနရေ၍ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျကွ၍ သာဓုချေါဖွဈကွမညျ ထငျပါသညျ ။
အမြှ ကုသိုလျတှရေ၍ ကြှတျလှတျသှားခွငျး အဆငျ့မွငျ့သှားခွငျးမြား ဖွဈကွသညျဟု သိရှိရပါသညျ ။ မနကျ၎နာရီမထိုးခငျ လူသူလေးပါးမထခငျ သုဿနျမှ မတ်ေတာပို့ရငျး တိတျဆိတျစှာထှကျခှာရပါသညျ။ တခြို့သင်ျခြိုငျးမြားတှငျ တဈညသာကွှ၍ တခြို့သင်ျခြိုငျးမြားကို နှဈည သုံးညကွှတတျပါသညျ။
ကွှရောကျရနျု ကွိုတငျမိနျ့ထားလမေ့ရှိပါ ည ၉ နာရီကြျော ဆရာတျောကွီးသင်ျကနျးရုံသညျကိုကွညျ့၍ သာသိရှိရတတျပါသညျ။
ကြှနျတျောတို့အမွဲတမျး အဆငျသငျ့ဖွဈရနျကွိုးစားနရေပါသညျ အဆငျသငျ့မဖွဈပါက ဆရာတျောကွီး တဈပါးတညျးသာကွှ သှားပါတော့သညျ နောကျမှအမွနျပွေးလိုကျရပါသညျ)
(၈) ကြောကျဂူဆရာတျောကွီး၏ ဦးခောငျးကို ခေါငျးရိတျခွငျး ကိစ်စအား မိမိကိုယျတိုငျလညျး မရိတျ တပညျ့မြားအားလညျးအရိတျ ခိုငျတား မတှဘေူ့းပါဘုရား (ထို့ကွောငျ့ ဆရာတျောကွီး၏ ဆံတျောမြားအား လိုခွငျသူ ပောမြားလှသျောလညျး တဈယောကျမြှ မရရှိကွပါ) (၉) ကြောကျဂူဆရာတျောကွီး ညသီတငျးသုံးသော ဝါးရုံပုတျကွီးမှ အလငျးရောငျမြားထှကျပျေါလာ၍ တဈတောလုံးလငျးထိနျသှားခဲ့ပါသညျဘုရား (လှနျခဲ့သော ၇ နှဈ့ခနျ့က ရှာကွီးတဈရှာ၏ သုဿနျသင်ျခြိုငျးတှငျ ဆရာတျော နှဈညတာ ဓူတငျဆောငျခဲ့ပါသညျ အထကျပါဖွဈရပျသညျ ဒုတိယညတှငျ တှမွေ့ငျခဲ့ရပါသညျ။
၎င်းငျးသင်ျခြိုငျးသညျ လူအစိမျးသမြေားကို မွမွေုတျသော နရောဖွဈပါသညျ ည၉နာရီကြျောခနျ့တှငျ ဆရာတျောအား သုဿနျအလယျလာကျ တှငျရှိသော ဝါးရုံပုတျကွီးအောကျတှငျ နရောခြ၍ ကြှနျတျောတို့က သင်ျခြိုငျးဇရပျပျေါတှငျ အိပျကွပါသညျ။
ည၁၂နာရီခနျ့တှငျ ရှာသား ၁၀ ယောကျခနျ့အပွေးအလှားရောကျလာ၍ ဆရာတျောကွီး သီတငျးသုံးသော ဝါးရုံပုတျကွီး မီးအကွီးအကယျြလောငျနပွေီဆိုပွီးအျောပွီး ပွေးလာကွပါသညျ။
ထိုအခြိနျတှငျ ထိုထဲမှလူတဈယောကျက တောမီးလောငျတာမဟုတျဘူး တောမီးလောငျရငျ အသံမွညျတယျ ခုကဘာအသံမှမကွားရဘူးဟု ခပျကယျြကယျြအျောလိုကျရာ အားလုံးတိတျဆိတျငွိမျသကျ သှားကွသညျ။
ဆရာတျောကွီး သီတငျးသုံးသော ဝါးရုံပငျကွီးမှ အလငျးရောငျသညျ တဈတောလုံးလငျးထိနျသှားခဲ့ပါသညျ ၃မိနဈခနျ့ကွာမညျ ထငျပါသညျ။
ထို့နောကျ တဖွညျးဖွညျးမှိနျသှား၍ အမှောငျအတိ ဖုံးလှမျးသှားပါတော့သညျ။ ထို့နောကျ ရှာသားမြားလညျး ပွနျသှားကွ၍ ကြှနျတျောလညျး အဖွမေသိသော အတှေးမြားဖွငျ့ သင်ျခြိုငျးဇရပျပျေါတှငျ ကနျြနခေဲ့ပါတော့သညျ။
(၁၀) ကြောကျဂူဆရာတျောကွီး၏ မတ်ေတာတျောကွောငျ့ အကွီးအကယျြ ပဈခတျနကွေသော တိုကျပှဲကွီး ရပျသှားခဲ့ပါသညျဘုရား (လှနျခဲ့သော ၆ နှဈခနျ့ကဖွဈပါသညျ ဆရာတျောကွီးအား တရားဟော တရားပွ ပငျ့ဖိတျကွ၍ နယျစပျဒသေသို့ ကြှနျတျောကားဖွငျ့ပငျ့ဆောငျခှငျ့ရခဲ့ပါသညျ။
တောလမျး ခရီးတှငျ ဆရာတျော ခပြေးသော မတ်ေတာပို့ စာသားမြားကို ကယျြနိုငျသမြှ ကယျြကယျြ လိုကျဆို၍ ကားမှနျတံခါးမြား ပိတျကာ မောငျးနှငျလာခဲ့ပါသညျ။
ပတျဝနျးကငျြမှ့ အသံမြားကို မကွားရဘဲ ကားကိုအမွနျမောငျးလာရာ တောလမျးတနရော တောငျကုနျးကှေ့ အရောကျ တှငျ အကွီးအကယျြ တိုကျပှဲဖွဈနကွေသော လကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့ နှဈခုကွားသို့ ဘှားခနဲ့ ရောကျသှားခဲ့ပါသညျ ။
ကားကိုဆကျမမောငျးရဲဘဲ အမွနျရပျလိုကျရပါသညျ လကျနကျကွီး ကရြောကျ ပေါကျကှဲသံမြားကို ဆကျတိုကျကွားရပါသညျ သနေတျ ဂတျလိုကျဆှဲသံမြား ကညျြဆံသံမြား တဒိုငျးဒိုငျး တရှီးရှီးအဆတျမပွတျ ကွားနရေပါ သညျ။
ကြှနျတျောနှငျ့ သူရဲကောငျးကွီး ကိုဖိုးအိတို့ လနျ့ဖတျြ၍ ကားအောကျသို့ ပွေးဝငျ၍ဝပျ နရေနျကွံကွပါသညျ ဆရာတျောအားကွညျ့လိုကျရာ မတ်ေတာပို့မပကျြ တညျငွိမျစှာ ဆကျ လကျ၍မတ်ေတာဘာဝနာပှားနပေါသညျ။
မညျသညျအခြိနျမှ စ၍တိုကျပှဲဖွဈနသေညျကိုမသိပါ ဆရာတျောကားရပျပွီး မကွာမှီ တိုကျပှဲရပျ၍ အားလုံးတိတျဆိပျသှားပါသညျ။ ကြှနျတျောတို့ကား၏ ညာဖကျတောငျကုနျးပျေါမှ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့မြား ဆုတျခှာသှားပါသညျ။
ကြှနျတျောတို့ကား၏ဘယျဖကျ ခြောကျထဲ့မှ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့ ၃၀ ခနျ့ လကျနကျကိုယျစီကိုငျ၍ ကားလမျးပျေါတကျလာကွပါသညျ နှဈဖကျစလုံး အကအြဆုံးမရှိ တပျဆုတျသှားကွသညျ ထငျပါသညျ။
(လှနျခဲ့သော ၇ နဈခနျ့လောကျကဖွဈပါသညျ ဆရာတျောကွီးအား ခန်တီးကြောကျစိမျးမှျောမှ တရားဟော တရားပွ ပငျ့ဖိတျ၍ ကြှနျတျောကားဖွငျ့ ပငျ့ခှငျ့ရရှိခဲ့ပါသညျ။
မဟာမွိုငျတောကွီးကို အလြှားလိုကျ ကားဖွငျ့ဖွတျ၍ ပငျ့ခဲ့ပါ သညျ။ ထိုအခြိနျတုနျးက ကားလမျးသညျ အငျမတနျပငျဆိုးရှား ကွမျးတမျးလှပါသညျ ယခုလညျးသိပျမကောငျးသေးပါ။
အဆိုပါဒသေသညျ ရလေမျးကိုသာ အသုံးမြားပါသညျ တဈနလေုံ့း တဈညလုံး ကားမောငျးခရီးတှငျ ကားတဈစီးမြှ မတှေ့ မရှောငျရပါ လူနအေိမျ ရှာမြားလညျး မရှိကွပါ။
မွဈကွောငျးတလြှောကျတှငျသာ နထေိုငျကွသညျဟုသိရပါသညျ။ ပငျ့ဖိတျထားသောနရော ဘုနျကွီးကြောငျးကိုအရောကျတှငျ အဆိုပါကြောငျးထိုငျဆရာတျောကွီးမှ ကြောငျးပျောမှ တအံတသွ ဆငျး၍ ကြှနျတျောကားနှငျ့ ကြှနျတျောကို နှဈပတျလောကျပတျကွညျ့ကာ ကားလညျးကောငျးလှနျး၍ လူလညျးတျော၍ သာရောကျလာသညျ မညျသူမြှ ဤခရီးကို ကားနှငျ့မလာကွဖူးဘူးဟု မိနျ့ခံရပါသညျ။
လမျးခရီးတှငျ လမျးကွမျးလှနျး၍ ကားအမွနျမောငျး၍မရပါ ဖွေးဖွေးမှနျမှနျ မောငျးလာရပါသညျ တနလေုံ့းမောငျးလာပါသညျ ညရောကျလာခဲ့ပါသညျ လမျးမှာ ကဉျြးမွောငျးလှ၍ လှညျးလမျးသာ ဖွဈသျောလညျး ကားရှောငျစရာ ကားမတှေ့ ၍ အဆငျပွပေါသညျ။
လမျးဘေး နံရံတိုကျမိ့လိုကျ သဈပငျ တိုကျမိ့လိုကျ အောကျက တိုကျလိုကျ အပျေါက တိုကျလိုကျ ဖွငျ့ပငျနောကျနေ့ တရားပှဲ မှီရနျ မှနျမှနျမောငျးလာပါသညျ။
ည ၁၁ နာရီကြျောလာပါသညျ ၁၂ နာရီထိုးရနျ ၁၀ မီနဈခနျ့အလိုတှငျ ဆရာတျောကွီးမှ လမျးတလြှောကျပို့လာသော မတ်ေတာပို့ကို ခဏရပျ၍
ကြှနျတျောဘကျကိုလှညျ့၍ တဈနလေုံ့း တဈညလုံး ဆိုတော့ ကားကောလူကော ပငျပနျးနလေောကျပီ ရှနေ့ားမှာ ကောကျရိုးပုံ ဖွဈဖွဈ သဈပငျအောကျ ဖွဈဖွဈ တှရေ့ငျ နား ကွမယျ လို့မိနျ့ပါသညျ။
ခဏခနျ့မောငျးလာပီးခြိနျတှငျ ကားမီရောငျအောကျ လမျးဘေးတှငျ ရာဇမတျကှကျမြားကာရံထားသော ခွံကွီးကိုတှရေ့ပါသညျ ခွံတံခါး ဖှငျ့ထား၍ ကားကိုခွံထဲ့မောငျးဝငျလိုကျပါသညျ ။
ကြှနျတျောလညျးကားပျေါမှ အမွနျဆငျး၍လူရှိလား လူရှိလား အျောချေါရငျး လူလိုကျရှာပါသညျ မညျသူမှ မတှရေ့ပါ ခွံထောငျ့တှငျ ဝါးဖွငျ့သပျရပျစှာ ဆောကျထားသော တဲ့လေးတဈလုံး တှရေ့ပါသညျ။
သုံးဖကျကိုဝါးဖွငျ့ကာရံထား၍ အခငျး ကိုလညျး ဝါးကွမျး လေး တဆငျ့ခံ ခငျးထားပါသညျ သံဃာစငျကဲသို့ ဖွဈပါသညျ။ ကြှနျတျောလညျး ကားပျေါတှငျ ပါလာသော ထိုငျခုံအားအမွနျခြ၍ ဆရာတျောအား ပိုငျရှငျမတှကွေ့ောငျး တဈညတာ ဝါးတဲကြောငျးအသဈလေးပျေါတှငျ သီတငျးသုံးဖို့ ပငျ့လြှောကျခဲ့ပါသညျ။
ဆရာတျောအား နရောခပြေးပွီး ကြှနျတျောလညျး ကားထားရှိရာ ခွံထောငျ့သို့ပွနျလာပါသညျ ကားဘေးမနီးမဝေးကှငျးပွငျတှငျ မီးမှေးရနျအသငျ့ဖွဈနသေော မီးဖိုကိုတှရေ့၍ မီးမှေး၍ မီးလှုံဖွဈပါသေးသညျ အသငျ့တှရေ့သော ပနျးသီးတဈလုံးကိုလညျး ကြှနျတျော၏ညစာအဖွဈ စားခဲ့ပါသေးသညျ။
ညတဈနာရီခနျ့တှငျ ကြှနျတျောကားထဲ့တှငျဝငျအိပျဖွဈပါသညျ မနကျ ၃ နာရီခနျ့တှငျ ဆရာတျောမှ ကားတံခါးလာခေါကျနိုး၍ ခရီးဆကျရနျ အခြိနျတနျပွီလို့မိနျ့၍ ခရီးဆကျခဲ့ကွပါသညျ မနကျ ၈ နာရီခနျ့တှငျပငျ့ဖိတျထားသော နရောသို့ရောကျခဲ့ပါသညျ ဆရာတျောကွီးမှ တရာဟော တရားပွ နှဈရကျပွုလုပျဖွဈပါသညျ။
အပွနျနတှေ့ငျ အားရုံဆှမျးကပျ နဆှေ့မျးအားသပိတျအတှငျးလောငျးလှူ ကပျလိုကျ၍ ပငျ့ဆောငျလာခဲ့ပါသညျ အလာတုံးက ညအိပျခဲ့သော ဝါးကြောငျးတဲ့တှငျ နဆှေ့မျးကပျမညျဟု စိတျကူးလာခဲ့ပါသညျ။
သို့သျော ထိုခွံတဲနရောသညျ သဈကွီးဝါးကွီးအပငျမြားသာ တှရေ့ပါတော့သညျ ထို့နရောတှငျပငျ့ ဆရာတျောကွီးအား အသငျ့ပါလာသော နဆှေ့မျးအား ကပျဖွဈခဲ့ပျါသညျ )(၁၂) ကြောကျဂူဆရာတျောကွီး၏ တရားတဈပှဲ အကွောငျးပွု၍ တဈရှာလုံး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ ဖွဈခဲ့ရပါသညျဘုရား (အိမျခွေ တဈရာကြျောရှိသော တောငျပျေါရှာလေး တဈရှာသညျ ဘာသာခွားတဈခုမှ စညျးရုံး၍ တဈရှာလုံးကြှတျ ဘာသာဝငျပှဲကွီး စညျကားစှာကငျြးပရနျ ပွငျဆငျနသေော နဖွေ့ဈပါသညျ။
ထိုနသေ့ညျ မိုးမြားလညျး ရှာနပေါသညျ တောငျကရြမြေားလညျးကနြပေါသညျ ခြောငျးရမြေားလညျးလြှံနပေါသညျ တောငျပျေါရှာ ဖွဈသဖွငျ့ လမျးမြားလညျး ရှံစေးမြားဖွငျ့ သှားလာရနျ အငျမတနျ ခကျခဲ့နပေါသညျ။
ထိုအခြိနျတှငျ ဆရာတျောကွီးသညျ ရှာလယျလမျးမှ တဈလှမျးခွငျး တဈလှမျးခွငျး လမျးလြှောကျ၍ ရှာထဲသို့ ဝငျလာပါသညျ။ ထူးခွားမူ့ အနဖွေငျ့ မိုးရှာနသေျောလညျး သင်ျကနျးမြား ရမေစိုပါ လမျးမှာ ဗှကျထနသေျောလညျး ခွထေောကျတို့တှငျ ရှံမြားမပကြေံပါဘာသာခွားသို့ ကူပွောငျးပှဲလုပျနသေော လူအုပျကွီးသညျ ဆရာတျော အနီးတှငျ ဝိုငျးအုံလာကွပါသညျ။
ဆရာတျောကွီးမှ တဈနာရီခနျ့ တရားဟောခဲ့ပါသညျ ဘာသာခွားသို့ မဝငျဖွဈတော့ဘဲ ဗုဒ်ဓဘာသာသို့သာ တဈရှာလုံး ဖွဈသှား ခဲ့ပါသညျ။ ထိုရှာလေးသညျ ယခုအခြိနျထိ ဆရာတျောကွီးအား မကွာခဏ ပငျ့ဖိတျ၍ ဝိပသာနာ တရားစခနျးမြား ပွုလုပျဖွဈဆဲ ဖွဈပါသညျ) (၁၃) ကြောကျဂူ ဆရာတျောကွီး၏ အစှမျးထကျ၍ အငျမတနျမှ အသုံးဝငျလှသော ဂါထာ တျောတဈပုဒျအား ကြှနျတျော ရရှိခဲ့ပါသညျဘုရား။
( ထိုဂါထာအား ဆရာတျောကွီးမှ ရှကေ့ခပြေး၍ ကြှနျတျောတို့မှ နောကျကလိုကျဆိုရငျး အသဲနှဈလုံးထဲ့ စှဲနခေဲ့ရပါသညျ။ ဆရာတျောကွီးကို အနယျနယျ အရပျရပျမှ ပငျ့ဖိတျကွ၍ ဓမ်မ ခရီး သှားလာ နထေိုငျရငျး အခကျအခဲမြားရှိလြှငျသျောလညျးကောငျး/ပွဿနာမြား/ပငျပနျးမူ့မြား/ဆငျးရဲမူ့မြား/အနှောငျ့အယှကျမြား/ငတျမှတျဆာလောငျမူ့မြား/အိပျခွငျမူ့မြား/ဖြားနာမူ့မြား/…..စသဖွငျ့ စသညျဖွငျ့ အဆငျမပွမေူ့မြား ကွုံလာတိုငျး ၎င်းငျးဂါထာ တျောကို ဆရာတျောကွီးမှ ကယျြကယျြလိုကျဆိုကွရနျ မိနျ့ကွား၍ ရှမှေ့ ခပြေးပါသညျ ကြှနျတျောတို့လညျး လိုကျဆိုကွရပါသညျ ကြှနျတော့ အတှကျတော မညျ့သညျ့ ပွဿနာ မြားမဆို၎င်းငျးဂါထာ အတိုငျး ရှတျဆို နှလုံးသှငျး ကငျြ့သုံးလိုကျပါက မပွလေညျစရာ အကွောငျး မရှိ အားလုံး အဆငျ ပွသှေားပါသညျ ဆရာတျောကွီး၏ ဂါထာတျောအား လိုကျနာကငျြ့သုံးနိုငျကွပါစေ။
ဘုရားတပညျ့တျောတို့သညျ မွတျစှာဘုရား သာသနာတျောကွီး အတှကျဆိုရငျနှားကဲ့သို့ ဆှဲပါမညျ ကြှဲကဲ့သို့ ရုနျးပါမညျ မွငျးကဲ့သို့ ပွေးပါမညျ မွညျးကဲ့သို့ ပိုးပါမညျ ခွငျေ်သကဲ့သို့ ရဲရငျ့ပါမညျ သိုးကဲ့သို့ ရိုးသားပါမညျ ။
ဆငျကဲ့သို့ အေါငျးပါမညျ ရကေဲ့သို့ ပေးဆပျပါမညျ လကေဲ့သို့ အကြိုးပွုပါမညျ မွကွေီးကဲ့သို့ သီးခံ သညျးခံ ပါတော့မညျ ဘုရား သာဓု သာဓု သာဓု ရှတျဆို ကငျြ့သုံးနိုငျကွပါစေ ) (၁၅) ကြောကျဂူ ဆရာတျောကွီးသညျ တဈခြိနျတညျး တှငျ နှဈနရော၌ တှမွေ့ငျ့ ရောကျရှိနတေတျပါသညျဘုရား (ဆရာတျောကွီး ကိုယျပှား နှဈပါးစီဖွဈ နတေတျပုံမြားကို မကွာခဏ ဆိုသလိုတှရေ့တတျပါသညျ ။
၎င်းငျးမြားထဲ့မှ့ လေးငါးခုလောကျကို ကြှနျတျော တတျသလောကျ ရေးသားတငျပွပါမညျ စာအရေးအသား မကြှမျးကငျြ၍ နားမလညျပါက သညျးခံ၍ နှဈခေါကျ သုံးခေါကျဖတျပေးကွပါရနျ တောငျးပနျအပျပါသညျ။
တဈခါသောအခြိနျက ဆရာတျောကွီးအား တရားပှဲမြားပငျ့ဖိတျကွ၍ ကရငျပွညျနယျဖကျကို ကြှနျတေျာ့ကားဖွငျ့ပငျ့ဆောငျခှငျ့ရခဲ့ပါသညျ။ ဆရာတျောကွီးအား ဘေးမှတငျဆောငျ၍ ကားမောငျးနစေဉျ ကလေးမွို့မှ ဖုနျးဝငျလာပါသညျ။
ကြောကျဂူဆရာတျောကွီး ဆှမျးဆနျစိမျးလောငျးပှဲပွီးရငျ ကလေးမွို့ထဲ ကွှအုံးမလားတဲ့ ကြှနျတျောက ဘာဖွဈလို့လဲလို့ ပွနျမေးမိ့ပါသညျ တမူးဖကျကရှာ တရှာမှာ ရှာလုံးကြှတျ ဆှမျးဆနျစိမျး လောငျးနတေယျ အဲဒါပိးရငျ ကလေးမွို့ထဲ့ကိုပငျ့ခွငျလို့ ဟုပွောပါသညျ။
ကြှနျတျောလညျး ခကျြခွငျးပငျ ကားမောငျးရငျး ကြောကျဂူ ဆရာတျောအား လြှောကျလိုကျပါသညျ တမူးဖကျကရှာတရှာမှာ ကြောကျဂူဆရာတျောတဈပါး ရောကျနတေယျတဲ့ဘုရား။
ဆရာတျောကလညျး ခကျြခွငျးပငျ ရုက်ခစိုးနတျတှကေ ခဈြကွလို့ အဲလိုဘဲ ခဏခဏဖွဈတယျ ဟုမိနျ့ပါသညျ (၁၆) တဈခုသော ဘုရားထီးတငျပှဲတှငျ တရားပှဲပငျ့ဖိတျ၍ ကြောကျဂူဆရာတျောကွီး ကွှရောကျခဲ့ပါသညျ။
ဘုရားထီးတငျရာ၌လညျး ဆရာတျောကွီးကိုယျတိုငျ ပါဝငျကုသိုလျယူခဲ့ပါသညျ ထီးတငျရာတှငျ အောကျဖကျကထီးတျောကို ရထားပျေါသို့ တငျရာနရောတှငျလညျး ဆရာတျောကွီးရှိနေ၍ စတေီထိပျပျေါတှငျ ထီးတျောအား ရထားပျေါမှခြ၍ စတေီတှငျ တပျဆငျပူဇျောသော နရောတှငျလညျး ဆရာတျောကွီး ရှိနခေဲ့ပါသညျ) (၁၇) လှနျခဲ့သော သုံးလေးနှဈခနျ့က ဆရာတျောကွီး ပဲခူးတိုငျး သုံးဆယျမွို့ ကြောကျဂူကြောငျးတှငျ ဝါဆိုဝါကပျ သော အခြိနျကဖွဈပါသညျ။
ကြှနျတျောလညျး ဆရာတျောကွီးနားတှငျ ကြောငျးအိပျကြောငျးစားဖွငျ့ အခြိနျ တျောတျော မြားမြားရှိနဖွေဈပါသညျ။
တဈနတှေ့ငျ ဆရာတျောကွီးမှ ကြှနျတေျာ့အား ချေါ၍ ကနျ (၇) ရှာကို တဈရှာတဈစီး နာရေးကူညီမူ့ ကားမြားလှူဒါနျးလိုသညျ စီစဉျ ဆောငျရှကျရနျ ကုသိုလျ ပေးပါ သညျ ကားမြားဝယျယူ ပို့ဆောငျရငျး ကနျ(၇)ရှာ ကြောကျဂူကြောငျးသို့ ရောကျခဲ့ပါသညျ။ ရနျကုနျပွနျရနျ လိုငျးကားစောငျ့ရငျး ကြောငျးပျေါတှငျ နှဈရကျသုံးရကျ နဖွေဈခဲ့ပါသညျ။
ကြောငျးပျေါတှငျ ဘုရားဖူးဧညျ့သညျ ဆယျယောကျခနျ့ အဖှဲ့တဈဖှဲံ တှေ့၍ ထမငျးမြားစားသှားကွရနျ အဆငျသငျ့ပွငျထားကွောငျး ညအိပျနားကွမညျဆိုပါကလညျး အဆငျပွပေါကွောငျး ကြောကျဂူဆရာတျောကွီးတော့ သုံးဆယျမွို့ မှာဝါဆို၍ မရှိပါကွောငျးပွောသောအခါ ဒီကြောငျးကို ခဏ ခဏလာဖူးပါကွောငျး ထမငျးလညျးဆှမျးတနျးတှငျ စားပီးပါကွောငျး ကြောကျဂူဆရာတျောကွီးကိုလညျး အခုဘဲတဈဖှဲ့လုံး ဖူးခဲ့ပီးပါကွောငျး ဝမျးသာ ပြျောရှငျစှာပွော၍ကားပျေါတကျကာထှကျခှာသှားကွပါသညျ ။ ခဏအကွာတှငျ နောကျဘုရားဖူးအဖှဲ့ တဈဖှဲ့ တှပွေ့နျ၍ ထမငျးမြားစားသှားကွရနျ ဖိတျဖွဈပါသညျ ။
ကြောကျဂူဆရာတျောကွီးကို ဖူးရငျး သင်ျကနျးလာကပျတာဖွဈကွောငျး သင်ျကနျးလညျးကပျခဲ့ပွီးကွောငျး သီလမြားလညျပေးလိုကျကွောငျး မြားစှာဝမျးသာပါကွောငျး လှူရနျမြားကို ရုံးကြောငျး ပို့ဖို့ မှာလိုကျကွောငျး ပွောပါသညျ ။
ကြှနျတျောလညျး ဧညျသညျမြားကို ရုံးကြောငျးပို့ နောကျ ဆှမျးတနျးပိုပွီးဆရာတျောကွီး သီတငျးသုံးရာ တဲကြောငျးလေးသို့ တိတျဆိပျစှာ တဈယောကျတညျ သှားခြောငျးဖွဈပါသညျ ။
အေးငွိမျးဆိတျငွိမျ လှသော တဲ့ကြောငျးလေးထဲတှငျ ဆရာတျော ထိုငျနကွေ ထိုငျခုံပျေါတှငျ အနကေထိုငျလေးခငျးထားတာ တှရေ့ပါသညျ။
ဆရာတျောတော့မမွငျရ မတှရေ့ပါ မရှိပါ ကြှနျတျောလညျး ရိုသစှော ရှိ့ခိုးဦးခြ၍ ဆရာတျောမှ ကားမြားပို့ခိုငျးသော ကိစ်စ ပွီးစီးပါကွောငျး နောကျထပျ ကုသိုလျပေးအလုပျခိုငျးလိုပါက အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီဖွဈကွာငျး သုံးဆယျမွို့ကိုရောကျလြှငျ ဆရာတျောနှငျ့တှသေောအခါ လြှောကျရနျရှိသညျမြားကို(ရီဟာ့ဇယျ) လုပျရငျး လြှောကျထားလိုကျပါသညျ။